:Bọchị: February 9, 2020
Samsun Trams merie Ọdụ ụgbọ oloko snow
Otu egwuregwu SAMULAS mere tram ruo n'ụtụtụ iji gbochie ụmụ amaala ahụ ịta ahụhụ n'ihi oke snow nke na-arụ ọrụ dị ka ụnyaahụ. N'ihi igbu oge na ọrụ bọs na Samsun ebe oke snowfall dị irè [More ...]
Mayors Rịọ Nkwado Steeti maka oru ngo Rail
11 Mayors nke Obodo Republican Party, ndị gbakọtara aka na ogbako omumu ihe a "N'obodo Smart Cites on Fertile Lands", bipụtara nkwupụta ikpeazụ isi isii nke ngwụcha omumu ihe omumu a. Iri na otu, n’ime ha Mersin [More ...]
Ọrụ Ndị Ọrụ Ọdụ ụgbọ elu na-ebufe site na Ọchịchị na Obodo
Site na '' Airgbọelu ụgbọ elu + Comzọ Njikọ Njikọ nke Njikọ 'nke General Directorate of Transportation Services Regulation bipụtara, a na-ebugharị ikike njem ndị njem n'etiti ọdụ ụgbọ elu na obodo ahụ site na ndị mepere emepe ma zigara ya na oflọ Ọrụ nke Transportgbọ njem na akụrụngwa. [More ...]
IETT Ego Nweta Ego Maka Ebufe Echi Ga-Emejuputa Echi ..! Nke a bụ Tarif Ọhụrụ
IETT Ego Nweta Ego Maka Ebufe Echi Ga-Emejuputa Echi ..! Nke a bụ Tarif Ọhụrụ; ETgwọ njem njem nke IETT ji pasent 35 mụbaa na Istanbul. Studentsmụ akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ zuru oke na ọnụahịa metrobus, nke a na-ejikarị mgbe ọ na-aga ọrụ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ. [More ...]
Ndị nnọchi anya gọọmentị Steeti South Afrịka gara BTSO
Urslọ ahịa azụmahịa na ụlọ ọrụ Bursa kwadoro maka Makalo Petrus Mohale, Mịnịsta nke Economy, Obere Mmepe Ọzụma, Njem Nleta na gburugburu ebe obibi nke Steti South Africa. Mịnịsta kwuru, sị, “Teknụzụ BTSO na [More ...]
Culture and Tourism Ministry, a mara ọkwa ya 2019 azụmahịa ikike na ọchịchị ulo ọnụ ọgụgụ nke gbaara ụlọ ọrụ dị na Turkey. Na Turkey, January-December 2019, mbata nke owuwu, tụnyere otu oge nke afo gara aga, percent [More ...]
Amasi Ego Nke Amasya Light Rail System Project Amalite
Mayor nke Amasya Mehmet Sarı, RAYSİMAŞ Rail Systems Engineering na Consulting Inc. zutere ndị isi banyere ọmụmụ gbasara atụgharị uche nke ọrụ ụgbọ ala. Onye isi obodo nke Amasya Mehmet Sarı, TCDD na TÜRKSAT [More ...]
Taa na Akụkọ ihe mere eme: 9 February 1857 Constanta - Boğazköy
9 February 1857 Constanta-Bogazkoy (Chernovada) nke akụkọ ihe mere eme na-enye otu asụsụ Bekee